UNWTO kusarudzwa kweMunyori Mukuru
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Bhizinesi Kufamba » UNWTO kusarudzwa kweMunyori Mukuru
Bahrain Kuputsa Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • nhau • Kuvakazve • Spain Kuputsa Nhau • ushanyi • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
rakanyorwa Galileo Violini
Mushandirapamwe wekusarudzwa kweUNWTO kwaSecretary General (World Tourism Organisation) kuri kuitwa. Nehurombo, nhaurirano dzakabatana nematanho anokwenenzverwa anogona kufadza mumwe wevachakwikwidza, kunyanya kana chinangwa chavo chiri chekuvhota nekukasira zvisinei nekushoropodzwa kusingaenzaniswi kwevakatungamira muhofisi mumakore makumi maviri apfuura, zvakafukidzwa nezvakataurwa nekongiri. iyo inosiyanisa vaviri vakakwikwidza, avo vasina kugara vakagamuchira kutarisirwa kwakakodzera kunze kweiyo nyanzvi yekudhinda.
Chimwe cheizvi zvirevo izvo zvinofanirwa kutariswa kwakanyanya ndiyo yakaiswa pamberi Iye Mai Al Khalifa kutanga Global Assistance Fund yekusimudzirwa kwekushanyirwa mushure mekupararira kwedenda.
Hupamhi hwayo hunopfuura kupfuura nzvimbo yekushanya uye inoratidza chiratidzo chinogona kuve muenzaniso kune mamwe masangano epasirese. Chimiro chebhajeti chemasangano aya, kazhinji UNESCO, chakavakirwa pamipiro yenyika imwe neimwe, kune ayo anowedzerwa anonzi zvipo zvekuzvidira zvine nzvimbo yakatsanangurwa yekuenda. Mhedzisiro ndeyekuti zviitiko zvinopihwa mari nesangano kuburikidza nemushonga uyu zvakanyanyisa chikamu chikamu chenguva refu zvirongwa zvesangano nekuti zvinowanzo guma kubva mukutaurirana kwenyika mbiri pakati pemupi uye nyika inobatsirwa - maitiro iro basa renyika dzepasirose ndere iro remubatanidzi, anokwanisa kwazvo panzira, kuve neruzivo rwakakosha uye kufarira mukuitwa kwechirongwa chakapihwa mari.
Chikumbiro chaAl Al Khalifa chinosimbisa kukosha kwehunhu hwepasi rose hwesangano, zvichideredza mamiriro ezvinhu kubva kune vanopa nyika. Iko kugona kweaya marongero kwakawanda uye muenzaniso uyo munyori anga achiteedzera kwenguva yakati unojekesa izvi. MuCentral America, kuumbwa kweRegional Fund yeSainzi neTekinoroji kwakagadzirwa nemipiro yakananga kubva kunyika dziri kutora chikamu kwave kuchiteverwa kwenguva yakati nemaonero ekuwedzera kusimbisa kuburikidza nekufananidza mari kubva kune vanopa uye emabhangi emari. Maitiro akadaro aizo wedzera pachena chibvumirano chesimba renyika idzi.
Kupora-denda kupora idambudziko risingagone kusiiwa chete kune nyika dzine huwandu hwakakura hwehupfumi. Iwo manejimendi eAssistance Fund inozvimiririra zvine hungwaru uye inozadzisa marongero akasarudzwa nesangano repasi rose chivimbiso chekuti kupora kuchagadziriswa nezvido zvepasirese.
Izvi hazvisi zvechokwadi chete kune UNWTO uye UNESCO. Zvinetso zvichasangana nehurongwa hweUnited Nations mumakore anouya zvakakurisa. Chimiro chekuzadzikisa Sustainable Development 2030 zvinangwa zvinofanirwa kukunda nhaka yedambudziko rakatanga gore rapfuura. Izvi zvinoda nzira nyowani dzekushandira pamwe, uye iyo yakataurwa naHE Al Khalifa inoita kunge inonakidza kwazvo kumasangano mazhinji ari kunyanya kurohwa nedenda. Mienzaniso yekutanga inouya mundangariro ndeye FAO neUNICEF.
Izvi zvinogona kuratidza kuti iyo Fund inotsanangurwa haisi yekambani. Neichi chikonzero, tinogamuchira chikumbiro uye tinotarisira kuzadzikiswa.
Zviripachena kuti chikumbiro chekumisa homwe yakadaro chinosangana nematambudziko makuru. Dambudziko rakakomba nderekuti vabatsiri vakuru vanosangana nematambudziko emari nekuda kwemari hombe yemari yeruzhinji yakamisikidzwa kugadzirisa kukanganisa kweCOVID-19. Imwe nzira inogona kuve yekutsvaga kubatanidzwa kweGAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon). Muenzaniso wakanaka ndiko kuburitswa kwakabudirira neUNESCO kweGlobal Alliance yeDzidzo mune iyo hofori yeInternet vanobatana. GAFA inogona kupa zvese zvemari uye zvehungwaru rutsigiro.
World Tourism Network yakadaidzira Kuzvibata musarudzo dzeUNWTO uye mushandirapamwe wayo wakawana rutsigiro pasi rose.
M. El Tayeb vakabatsirawo kuchinyorwa chino.